Waxyaabaha Ay Raggu Sameeyaan Kaliya Haddii Ay Daacadyihiin Boqolkiiba Boqol - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Waxyaabaha Ay Raggu Sameeyaan Kaliya Haddii Ay Daacadyihiin Boqolkiiba Boqol
Ragga daacadda waxay leeyihiin hab gaar ah oo ay kugu tusaan inay ku jecelyihiin. Wax kastana si wanaagsan ayay u sameeyaan.
Qof kasta marka uu xiriir la yeelanayo qof kale gabar ama wiil, wuxuu iska dhigaa qof wanaagsan oo noqon kara lamaane mustaqbal, laakiin qiyaanada ayaa badatay muddooyinkaan dambe iyadoo rag iyo haween badan ay wax caadi ah ka dhigteen.
Halkaan ka akhriso waxyaabaha ay sameeyaan ragga daacadda ah.
Run ahaantii waxaa jiraan rag badan oo dabeecad ay u tahay been iyo ballan kabax arrintaas oo ah mid aanan wanaagsaneyn.
Wax waliba waxaa kaaga fudud inaadan qaadin ballan aad ogtahay inaadan hadhoow ka bixi doonin.
Si kastaba, waxaa sidoo kale jiraan rag badan oo ilaaliya ballamaha isla markaana og culeyska ay leedahay qaadista ballan, sidaa darteed, ninka daacadda ah wuxuu ilaaliyaa eraygiisa marka uu ballan sameeyana ama qaado dhib kasta ayuu maraa si uu ballantaas u oofiyo.
Sir ma jirto/waxba ma qariyo
Siraha ama waxa la qariyo waa kuwo burburiyay guurar badan. Ninka daacadda ah wuxuu kuu sheegaa wax kasta, ha xumaadaan ama ha samaadaan si uu uhubiyo inaadan waxba kala qarsan labadiina.
Haween kale kulama shukaansado
Haddii aad tahay gabadha kaliya ee uu jecelyahay, adiga kaligaa ayuu kula haasaawaa. Ma dhacdo inuu haween kale kula shukaansado. Ragga daacadda ah waa kuwo yaqaan waxyaabaha xad kabaxa ah iyo xaaladaha horseeda qiyaanada.
Wuu qirtaa qaladaadkiisa wuxuuna ka bixiyaa raalligelin marka uu qaldanyahay. Ninka daacadda ah ee wanaagsan waa mid meel iska dhiga kibirka iyo islaweynida.
Wuxuu isticmaalaa “anaga”
Waxaad qeyb ka tahay mustaqbalkiisa mana sameeyo go’aanno muhiim ah adiga la’aantaa. Ninka daacadda waxaad qeyb ka tahay qorshayaashiisa muhiimka ah wuxuuna kaala tashadaa go’aanada muhiimka ah kahor inta uusan tallaabo qaadin.